China EVA Foam Egcwaliswe Fender kukhuseleko Ship mveliso kunye nabathengisi | Haohang
I-EVA Foam Egcwalisiweyo yeFender yoKhuseleko lweNqanawa
1.Imbala. Uyilo lwe-2. 3.Can njengentonga yokudada elwandle. 4.Flexible, okonga iindleko. 5.Ihlala isebenza ngokupheleleyo nokuba ulusu ligqobhoziwe. 6.Easy ukufaka, ukuhamba kunye nokusebenzisa. Ukugcinwa okuphantsi.
Uhlobo lolu hlobo lwabagcini
I-EVA foam egcwele fender luhlobo lwefender eyakhayo enezinto ezenziwe nge-polyurethane njengoluhlu lwayo lokhuselo lwangaphandle kunye ne-polyethylene okanye iplastiki yegwebu eyila icandelo elingaphakathi elomeleleyo.
Ngokwe-comoressive deformation yokufumana ifuthe lamandla enqanaweni xa usebenzisa. Ukuze isinciphise isiphumo esonakalisayo kwi-pier kunye nenqanawa.
I-polyurethane fender edadayo ikwaluhlobo lwefender ecinezelweyo eyakha ngaphandle umaleko protirive ngezinto lyu yamkela lyu izinto amagwebu okanye iplastiki inegwebu njengesixhobo esiphakathi; iziphumo ezonakalisayo kwizikhululo zeenqanawa nakwiinqanawa ziya kuba njalo
kuncitshiswe nguxinzelelo ukunyusa ifuthe lamandla kwiinqanawa ekuhambeni kwe usebenzisa i-fyurethane fender edadayo.
Abagcini baselwandle abagwebu amagwebu bathatha iimpembelelo ngelixa ulusu luchasa ukunxiba kunye nokukrazula nakweyiphi na imeko enzima, oko ke kubonelela ngenkqubo enzima, enobunzima bokusebenza elwandle kumazibuko, kunxweme kunye nokusetyenziswa kwenqanawa ukuya kwinqanawa.
3.Can njengentonga yokudada elwandle
4.Flexible, okonga iindleko
5.Ihlala isebenza ngokupheleleyo nokuba ulusu ligqobhoziwe
6.Easy ukufaka, ukuhamba nokusebenzisa. Ukugcinwa okuphantsi.
Abagcini abagwebi amagwebu yintsebenzo ephezulu kunye nenkqubo enzima yokusebenza edadayo yefender.
I-fender fender yenziwe nge-polyurethane elastomer skin (okanye ulusu lweerabha), umaleko wokuqinisa wenayiloni kunye ne-foam evaliweyo yeseli.
Inokufakwa kwamandla okuphezulu kunye namandla okusabela asezantsi.
Kutheni le nto abathengi bathanda ukukhetha iimveliso zethu ze-HAOHANG?
1. Ixabiso leMali, uya kufumana elona xabiso libalaseleyo ngokusekwe kumgangatho ogqwesileyo.
2. Ubungcali obungalinganiyo, sithembisa inqanaba lokuqala lomgangatho wemveliso kunye nenkonzo.
3. Imveliso elungileyo yokuphila kunye newaranti esemgangathweni, iimveliso zethu zinobomi obude bokuseva iminyaka eyi-10-15years.
Ngeli xesha, sineminyaka emi-3 yewaranti esemgangathweni.
4. Inkonzo yobungcali emva kokuthengisa. Siza kunceda abathengi bethu ukusombulula nayiphi na imibuzo yemveliso ngaphakathi kweeyure ezingama-24.
5. Njengabathengi bethu, siya kubonelela ngezixhobo zokulungisa simahla.
Egqithileyo Irabha yendalo kunye namalaphu eTire ngokwenza iAirbag
Okulandelayo: Ifomathi yeebhaluni eziHlangeneyo zeTyhubhu yeTyhubhu yeCulvert
Iibhola zomoya zasemanzini, China Irabha Fender, Iinqanawa zeTec, Irabha yeFender, Inqanawa yomoya, Ibhloko edibeneyo,